musha nyika dzakabatana WWE Superstars Nia Jax Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nyaya Yakazara yemuAmerican wrestler anozivikanwa ane zita chairo "Savelina Fanene”Uye zita remadunhurirwa "FaceBreaker ”.
Yedu Nia Jax Yehucheche Nyaya pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Kuongororwa kwesimba reWWE Nyeredzi kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yehupenyu pamberi pemukurumbira, nhoroondo yemhuri uye hupenyu hwega. Kunyanya zvakadaro, zvimwe OFF uye ON-Screen zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Hongu, munhu wose anoziva iye ndomumwe wevanonyanya kutonga vakadzi Superstar muWWE. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Nia Jax's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Nia Jax Yehucheche Nyaya - Hupenyu hwepakutanga uye Mhuri kumashure.
Nia Jax akazvarwa musi we 29th waMay 1984 muSydney muAustralia. Akazvarwa kuna amai vake Renate Fanene uye kuna baba vake Joseph Fanene.
Nyika yeAmerica yedzinza rakasanganiswa neGerman neSamoan midzi yakasimudzwa kunzvimbo dzakasiyana kusanganisira New Zealand, Honolulu muHawaii pamwe neSan Diego kuCalifornia.
Nia Jax akakurira munzvimbo dzakasiyana. Credits: Facebook.
Kukura munzvimbo dzakambotaurwa pamusoro pehama dzake, Jax akakurira zvakasiyana zvakanyanya nekuti vasikana vakawanda vakakwidziridzwa sei sezvaakadzidziswa nababa vake kuva musikana ane utsinye uye asingatyi aipamba mitambo yepambano nevakomana.
Nia Jax akakurira nemukoma uye mukuru mukoma. Credits: Facebook.
Chiyero chaizotora makore gare gare chibatsire Jax kuumba hupenyu hwake husina utsinye pashure pokunge apedzisa dzidzo yake uye akaita sarudzo yehupenyu inoshandura upenyu.
Nia Jax Dzidzo:
Dzidzo yaJax inosanganisira kudzidza kwake kuCarlsbad High Chikoro uye kufambira mberi kwake kuPalomar College muSan Marcos, California.
Ndichiri kumasangano akanangana, Jax aive mutambi anoyemurika airatidzika kuve neruoko mumitambo yese inosanganisira judo, kickboxing, karate uye basketball.
Zvisinei, yaive Jax's basketball kugona kwakamuita kuti abude semukurumbira mudzidzi wepakoreji uye kaputeni akatungamira timu yake kuenda kuPacific Coast Conference Championship mu2002 asati apedza degree reBachelor muBhizinesi.
Nia Jax seMucheka weBikombe. Credits: Twitter
Paakapedza kudzidza, Jax akabatwa muchidimbu pamharadzano yesarudzo yebasa, nguva iyo yaakatambira gigi rekuenzanisira-raimupa gweta raakapiwa nemutongi paakapinda chiitiko muCalifornia.
Akabva atanga kuvaka muviri uye akafuridzirwa kuti afunge nezvebasa pakurwisana pashure pokunge atarisa mukoma wake, Dombo uye John Cena kurwa panguva yechiitiko chakamakwa "Kamwe muUpenyu Hwose Mechi" paWrestleMania XXVIII.
Zvisinei, Jax akatarisana nenyaya yekusagadzikana kwemuviri sezvo aifunga kuti vakadzi vanofamba zvakanaka muWWE vari divas vane miviri yakatsiga.
"Ndakatarisa kurwisana ndichiri muduku asi ini handina kumbobvira ndanzwisisana neyese yeAraas. Ndagara ndiri musikana mukuru, uye handina kufunga kuti WWE ingada musikana wangu hukuru, saka ini handina kumboratidza kurota kwangu kurwisana. "
Kutya kwaJax kwakagadziriswa nainini vake, Ata Maivia-Johnson (Amai vaRead) avo vakamukurudzira kuti atevere kurota kwake pasinei nokuti ainzwa sei.
Nia Jax Biography Chokwadi - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
Akavimbiswa nemashoko anokurudzira kubva kuna maiguru vake, Jax akasaina kuWWE uye akaendeswa kuchikamu chayo chekuvandudza cheNXT.
Kutanga kuzivikanwa nezita rezita rekuti Zada, Jax akaita ring yake yekutanga pa7th yaMay 2015 semubatanidzwa pamwe naDevin Taylor. Ivo vaviri, zvakadaro, vakarasikirwa nemutambo naBayley naCarmella.
Nia Jax akaita nheyo yake muna NXT nezita rezita reZada. Credits: Youtube.
Yakazotevera yekutanga mhete yekuedza akaona Jax achichinja rake rezita zita kuti "Nia Jax" mushure mezvo akatanga kurekodha mitsara yekukunda achitanga neyake yekutanga solo mutambo wakatarisana naEvie.
Panguva yepamusoro yebasa rake rekutanga kuNXT Jax akakunda katatu kutyisidzira mutambo pamusoro paCarmella uye Alexa Bliss kumira senhamba yekutanga kukwikwidza naAsuka muNXT Women's Championship. Iye, zvakadaro, akarasikirwa naAshuka uye akanyoreswa kuRAW.
Nia Jax Biography - Kumuka Mukurumbira Kubudirira Nhau:
Paaive paRAW Jax akasiya mushandirapamwe wake nekuhwina mitsara mushure mekuita kutanga kwake kurwisa Britt Baker muna Chikunguru 2015.
Akatanga muWrestlemania Mwedzi yakazotevera muna Kubvumbi 2016 asi anga asiri padhuze nekuwana mukurumbira kusvika gore ra2018 paakakunda yaimbova shamwari yake yepamusorosoro Alexa Bliss kuti atore zita rake rekutanga saRaw Women Champion.
Nia Jax akakunda Alexa Bliss kuhwina zita rake rekutanga revakadzi reRaw. Credits: Cageside Zvigaro.
Nia Jax murume ndiani?
Nia achiri kuzoroora mushure mekunge aine imwe chete inozivikanwa nhoroondo yekufambidzana neyaimbova NXT Superstar Josh Woods.
Idzo dzaimbova shiri dzerudo dzakasangana panguva iyo Jax akarwa munzvimbo yeNXT yekuvandudza. Vakafambidzana pakati pe2014-2016 vasati vagadzirisa kupatsanurana.
Jax akaramba asina kuroorwa kubvira ipapo uye anoita kunge akatarisana nekuenderera mberi nebasa rake.
Nia Jax akanyorwa naJosh Woods pakati pa2014-2016. Credits: Player Vadzimai & Vasikana.
Nia Jax Hupenyu Hwemhuri:
Jax akaberekerwa mumhuri yevashanu, tinokuudza mashoko echokwadi nezvemhuri yemhuri yake.
Nezve Nia Jax baba:
Joseph Fanene ndibaba vane rudo uye vanotsigira vewrestler. Iye anozivikanwa nekushandisa iro rinobata simba remitambo kuchengetedza Jax nehama dzake kubva mumatambudziko pamwe nekusimudzira kukwikwidza kwakanaka pakati pavo.
Nia Jax ane ukama hwepedyo nababa vake Joseph Fanene. Credits: Pinterest.
Nezve Nia Jax amai:
Renate Fanene amai vane hanya avo vakashanda mabasa akawanda kuona kuti vana vavo vaigara vaine zvese zvavaida. Iye anoda Jax uye anogovera hukama hwepedyo naye.
Nezve Nia Jax siblings:
Jax ane hama mbiri dzakanaka idzo diki dzinozivikanwa nezve zvimwe kunze kwekuti ivo vakakurira naJax uye pane imwe nguva, vakatamba nhabvu yeAmerica.
Nia Jax naamai nehanzvadzi: Credits: Pinterest.
Nezve Nia Jax hukama:
Jax inhengo yemhuri inozivikanwa yeAnoa'i kubva kudivi remadzibaba ake uye nekudaro ane hukama nedzimwe nhengo dzemhuri yepamberi yekurwira kusanganisira Dombo (Dwayne Johnson) uye Kutonga kweRoma.
Untold Basa Rechokwadi:
Basa raJax mukurwira rakapotsa rapera pavakangotanga mu2014 mushure mekunge iye natete vake Ata Maivia-Johnson (Amai vaDombo) vaibatanidzwa mumusoro kuenda kunorovera neimwe mota inotyairwa nemutyairi akadhakwa. Neraki, kana Jax kana tete vake Ata havana kukuvara zvakanyanya.
Chiitiko chekufa kwemotokari inouraya mu2014: Credits Instagram.
Akambotora nguva yekusasiya kubva kuWWE mu2017 mushure mekunge achinzwa achinetseka.
Mune dzimwe mhizha, Jax inowanikwa pamitambo yemavhidhiyo sevanhu vanogona kutamba. Mitambo iyi ndeyeWWE 2K17 uye WWE 2K18.
Nia Jax Hupenyu hweMunhu:
Jax mukadzi akatsunga uye akasimba ane hunhu hwakasiyana hunomuparadzanisa nemumwe munhu.
Saizvozvo, iyo yekuwedzera-saizi mutsimba ane pamusoro pemakore akashanda semuenzaniso unokurudzira kuti vanhu vanogona kuzadzisa zviroto zvavo zvisinei nehurefu, kutaridzika, rudzi uye huremu.
Iye, saka, anomiririra vakadzi kutenderera pasirese vanotarisa kumusoro kune zvaakawana chero pavanova nemanzwiro ekusafanira kupinda mu "tsika yechinyakare" yezvinoita vasikana muindasitiri yevaraidzo.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Nia Jax Childhood Nhau uye Untold biography chokwadi.